Zavatra 9 Tsy tokony holavinao mihitsy ny fiainanao - Blog
Zavatra 9 Tsy tokony holavinao mihitsy ny fiainanao
Tsy azoko antoka raha nahatsikaritra an'io ianao, fa ny fiarahamonina kosa toa mametraka ny fandavan-tena amin'ny mpandeha an-tongotra somary hafahafa.
Raha misy olona manolotra ny tenany ao amin'ny sakafo izy ireo mankafy, dia mahatsapa ho toy ny tsy maintsy hiaiky momba ny fomba 'ratsy' ry zareo isika.
Raha mandray anjara amin'ny hetsika iray izay mitondra fifaliana ho azy ireo izy ireo, saingy tsy dia malaza loatra, dia afenin'izy ireo ilay izy, na ialàn'izy ireo fialantsiny noho ny maha-tanora sy mahatsikaiky azy ireo.
Moa ve ianao tsy nihazona ny tenanao tamin'ny zavatra niainany sasany?
Iza no ho velona raha ny truer dikan-tenanao?
Andeha hojerentsika ny sasany amin'ireo zavatra nolavin'ny olona maro ny tenany, ary maninona ity karazana fandavana ity no mila tendahina amin'ny sisiny mba hanasoavana ny maha-azo itokiana sy fifaliana.
1. Fahamarinana momba ny zavatra ilainao
Na dia be aza ny fanahiana sy ny fahaketrahana vokatry ny tsy fandanjana simika, PTSD, sns, maro ny olona no miatrika ireo olana ireo satria mahatsiaro tena ho voatery miaina amin'ny fomba tsy tadiaviny izy ireo.
Ny fitazonana an'io karazana masquerade io dia mandreraka fo , ary manimba amin'ny farany.
Fantatry ny olona ny zavatra ilainy, ary mahatsapa mahatsiravina ny tsy fanarahana ireo filàna ireo.
Ny olana dia maro no matahotra ny hanao ny marina momba ny filàny lalina satria matahotra ny ho very izay ananany.
Saingy, amin'ny farany, saika ny olona rehetra dia tonga amin'ny toerana iray izay ny tahotra fanaintainana na tsy fahombiazana dia hitondra seza any aoriana ny fanaintainan'ny fiainana tsy mendrika.
Ary avy eo dia misy zavatra hafahafa mitranga: mivoatra izy ireo.
Ny fahatokisanao tena amin'ny tenanao dia manome anao fotoana ahafahana mitombo amin'ilay olona azonao atao.
Eny, tsy ho mora indraindray.
Eny, tsy maintsy hiady mafy ianao ary haharitra.
Eny, mila herim-po izany.
Fa rehefa tsy mandà ny filanao manokana sy ny fanirianao intsony ianao, dia mavesatra ny soroka.
2. Fitiavan-tena tanteraka
Betsaka ny zavatra henontsika momba ny fitiavantsika tena amin'izao fotoana izao, saingy vitsy ny olona no toa mahatakatra ny tena dikan'izany.
Ny fitiavan-tena dia tsy hoe mahatalanjona fotsiny amin'ny famoahana Instagram farany anao taorian'ny nandanianao fotoan-tsary tonga lafatra.
jessica simpson vady eric johnson
Momba izany tsara fanahy amin'ny tenanao , ary mitia ny tenanao tsy misy fepetra mitovy tanteraka aminao, amin'izao fotoana izao .
Ianao. Raha marina ny anao, izao. Mangoraka sy feno.
Satria mahagaga ianao.
3. Fanehoan-tena amin-kitsimpo
Lazao ny marina, na dia mihozongozona aza ny feonao.
Ny lesona amin'ity fitanisana ity dia mety ho sarotra tokoa ny mianatra, saingy mitohy amin'ny # 1, etsy ambony.
Mazava ho azy fa ny fanehoana tena marina dia manarona ny zavatra ilainao, nefa koa ny eritreritrao, ny fihetsem-ponao ary ny safidinao manokana.
Mety hidika izany na inona na inona manomboka amin'ny famoahana hevitrao tena tsy mitovy amin'ny mitovy taona aminao na ny mpianakavinao, hatramin'ny fitafiana amin'ny fomba tena tianao, fa tsy ny fomba fiheveranao ny fitafianao 'tokony'.
Ny olona sasany dia aleony mandeha miaraka amin'ilay onjampeo satria matahotra sao ihomehezana, hokianina, na hankahalaina mihitsy aza izy ireo noho ny maha izy azy amin'ny tenany.
Ny hafa mamehy ny fihetsem-pony satria tsy te-hampahatezitra olona iray hafa.
Betsaka amintsika no mety ho voafehin'ny famoretana ny Fahamarinantsika amin'ny fikojakojana ny toe-piainana izay tsy fantatsika akory hoe iza intsony isika.
Amin'ny toe-javatra toy izany, ny gazety amin'ny isan'andro no nanosika sy ny fanontaniana mety ho mampino manampy.
Misy fomba hanehoana ny tenanao authentically amin'ny toe-javatra rehetra, na dia ny sasany dia mety mila tontolo kely ny fampifanarahana.
(… Toy ny manao atin'akanjo akanjo lava miendrika avana eo ambanin'ny akanjonao. Na mitovy amin'izany. Azonao ny hevitra.)
Rehefa milaza ny marina ianao dia milatsaka ny rindrinao miaro.
Tsy voatery tokony hotandremana, miezaka ny hitandrina ny saron ao an-toerana.
Io dia ahafahanao mahazo aina kokoa amin'ny fifandraisanao amin'ny fiaraha-monina, satria ianao no tsiro tsara indrindra sy mahatalanjona indrindra ANAO fa misy izany.
Ary izany no mahavariana!
4. Toerana hanasitranana
Ny ankamaroan'ny olona dia antenaina ho 'eo amin'ny' tsara sy tsara ary hivoaka ara-bakiteny foana.
Ny olona miverina miasa roa andro aorian'ny fisaraham-panambadiana na fahafatesan'ny olona akaiky azy dia deraina tamin'ny fanoloran-tenany…
... toy ny hoe afaka miborosy eny fihetseham-po mahery vaika dia marika lehibe ny fitondran-tena sy ny toetrany.
Tsy tena midika izany hoe eo amin'ny toerana tsara izy ireo, sa tsy izany?
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, midika fotsiny izany fa napetrany tao anaty boaty ny fihetsem-po sarotra rehetra ary nofonosiny tao anaty lalimoara maizimaizina mba ho voalamina avy eo.
Ny zavatra manan-danja indrindra azontsika omena ny tenantsika mandritra io fotoana io dia ny toerana hanodinana izay rehetra iainantsika, mba hahafahantsika manasitrana.
Ratra na fahatapahana ratsy no mila karakaraina mba hahasitrana azy tsara, sa tsy izany?
Zava-dehibe ihany koa ny famelana fotoana sy fikolokoloana malefaka hanasitranana amin'ny ratra ara-pihetseham-po sy ara-tsaina toa anao amin'ny ratra ara-batana.
Rehefa tonga ny fotoana hanasitranana dia lazao amin'ireo izay akaiky anao ny zavatra ilainao.
Ny olona izay tena miahy anao ho fantatrao, ka ho tahaka ny manohana araka izay azo atao.
Ataovy izay hilazanao ireo fetra ilainao hotazomina hahasoa anao manokana.
Mety ho dodona loatra ny olona hanampy anao hahatsapa ho tsara kokoa, ary amin'ny fomba toy izany, mitondra tena amin'ny fomba mahomby azy ireo mahatsapa tsaratsara kokoa, toy izay manaraka ny safidinao manokana.
Manaova marin-toetra sy marina, ary makà amin'izay fotoana ilainao.
Fomba 11 hankafizana ny fiainana toy ny teo aloha
Ny lisitra faramparany amin'ireo fanontaniana 30 hanontanianao ny tenanao momba ny fiainana
Fomba 10 hampiarahana ny fiainanao indray mandeha sy ho an'ny rehetra
Zavatra 21 Tokony ho Fantatry ny rehetra momba ny fiainana
5. Fialamboly 'mampihomehy'
Betsaka amintsika no mandà ny zavatra niainantsika izay hahafaly sy hanome aingam-panahy antsika satria mieritreritra izahay fa adaladala na tanora.
ahoana ny fatokisana olona indray amin'ny fiarahana
Izahay dia mazàna milalao miaraka amin'ny fahazazana , fa mampino kosa ny milalao zava-dehibe ho an'ny olon-dehibe koa.
Rehefa nilalao izahay, tokoa izahay eo amin'ny fotoana, ary matetika no manana ny mampino ny fotoana mahafinaritra rehefa manao izany.
Matotra, rehefa manipy frisbee eny amoron-dranomasina miaraka amin'ny namanao ianao, na milalao karatra na lalao amin'ny birao mahatsikaiky mahatsikaiky, dia miasa saina ve ianao?
Sa ve ianao mirotsaka tanteraka - vatana, saina ary fanahy - amin'ny hetsika izay manentana ny fihomehezana sy ny fandaozana tanteraka ny 'olon-dehibe' mandritra ny minitra vitsy?
Eritrereto ireo teny nozarain'i George Bernard Shaw, lehibe:
Tsy mitsahatra milalao isika satria mihantitra, mihantitra satria mijanona tsy milalao.
Play ny miato tsaina sy boosts endorphins. Ireo hormonina mahafaly ireo dia afaka mampihena ny fanaintainana, manampy antsika ho sitrana ary hanampy antsika hankasitraka bebe kokoa ny fiainana fotsiny, fantatrareo?
Omeo alalana ny tenanao hanao zavatra 'mampihomehy' izay mahatonga anao SAMBATRA .
Mandehana mialoha ary mandany ny faran'ny herinandro lalao video. Alefaso amin'ny poloney mamirapiratra ny rantsan-tongotrao. Netflix ve ny hazakazaka raha mameno ao amin'ny boky mandoko.
Na dia 60 taona aza ianao.
Na 25 ary mahatsapa fa tsy maintsy mitondra tena toy ny 80.
Aho amin'ny 40s tany am-boalohany. Miara-miasa amin'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao aho, ary hajain'ny mpiara-mianatra amiko indrindra…
... ny ankamaroan'izy ireo tanteraka fantatro fa mandany faran'ny herinandro aho amin'ny faran'ny unicorn goavambe, mandehandeha eny amoron'ny renirano.
Manana ny 'mampihomehy', ary ho unapologetic momba izany. Tsia, “miala tsiny, fantatro fa hadalana izany, fa….”
Nahoana aho no leo amin'ny fifandraisana
Tsy misy an'izany.
Ianao no manao anao. Mamirapiratra.
6. Tranon-trano kely
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny tsy fananantsika zavatra izay ankafizintsika dia hita matetika ho toetra tsara.
Ankehitriny, toy ny amin'ny zava-drehetra, dia zava-dehibe izany mahita fifandanjana ...
Mandà ny sôkôla ny tenanao satria mihevitra ianao fa filana tsy ilaina na mpanota io dia mahavaky fo.
Mihinana na inona na inona, fa sokola hotapahiko ny fonao amin'ny fomba hafa, ahoana ny mety ho lalan-lalan-dra, matavy loatra, ary ny boka.
Nankafy ny sôkôla truffle amin'ny tolakandro kafe no mahafinaritra.
Eritrereto eto ny Goldilocks ary tadiavo ny fandanjalanjana izay marina fotsiny ho anao.
Inona no mahafaly anao?
Iza ny indulgences izay mahafaly anao fa monina vatana vetivety ianao?
Fandroana bubble lava sy mafana?
Sushi eo am-pandriana ny zoma alina aorian'ny fiasana?
Fanorana amin'ny hozatra lalina?
Handeha hijery opera?
Mitsoka kafe eo amin'ny tokotaninao eo alohan'ny filentehan'ny masoandro?
Alika kely miforitra?
Ny fanandramana isan-karazany dia mety hahatonga ny fonao hihira, ary zava-dehibe ny fandraisana anjara tsy tapaka amin'izany.
7. Vintana hanenjehana ny filanao
Rehefa mihalehibe dia olona firy no hilaza fa raha afaka miverina amin'ny lasa izy ireo ary manao zavatra hafa, dia hanao izany izy ireo?
Ny iray amin'ireo zavatra mahazatra indrindra safidin'ny olona hanovana dia ny asany.
Betsaka amintsika no nobeazina tamin'ny hevitra fa raha mankafy ny asantsika isika dia tsy 'asa' izany.
Izay tokony hataontsika dia tokony ho fialamboly fa tsy.
Ankehitriny, mety mifanaraka amin'ny olona sasany izany. Ny sasany mety aleony manao asa noho ny filàny, ary tsy maninona koa.
Ny lakile dia ny hahazoana antoka fa mandany farafaharatsiny amin'ny fotoana fikatsahanao vola ianao zavatra mahaliana anao .
Raha manana fitiavana mihoatra ny iray ianao dia tsara izany! Fantaro fotsiny hoe iza no laharam-pahamehana, ary fantaro hoe ohatrinona ny fotoana tokony hatokanao ho an'ny tsirairay. Avy eo ianao dia afaka mandahatra fotoana ho azy rehetra mifanaraka amin'izany.
Mety ho kely na inona na inona avy amin'ny sary hoso-doko ho biby fanarenana, na nitsangana zaridaina, na CrossFit.
Na inona izany na inona, raha tianao io dia ataovy izay hahatanteraka azy.
8. Fotoana hahatongavana fotsiny
Olombelona aho fa tsy olombelona. - Kurt Vonnegut
Ny ankamaroantsika dia ao amin'ny maodim-pamokarana tsy miovaova, miaraka amin'ny adidy tsy tambo isaina manilika antsika isaky ny mandeha.
Hatramin'ny fotoana ifohazantsika ka hatramin'ny faharoa dia resin-torimaso isika, dia manana adin-tsaina sy andraikitra tsy ampoizina hatrany.
Vitsy dia vitsy amintsika no tena manokana fotoana hamenoana an'io angovo io, antony iray hafa mahatonga ny fihenan'ny ahiahy sy ny fihenjanana.
Raha misy zavatra hitako tao anatin'ny zaridaina sakafo an-taonako maro dia ny filàna famenoana tany izany, ary avelao hihorakoraka etsy sy eroa.
Ny voa ambolena amin'ny tany vaovao manankarena otrikaina dia miroborobo. Izy ireo dia hitombo ho zavamaniry lava sy mahery mamokatra voankazo mahasalama sy mahasalama.
Raha mamboly voa foana aho nefa tsy mameno an'io tany io dia tsy hitsimoka mihitsy izy ireo amin'ny farany. Ho potipotika sy maina fotsiny ny tany - lany tanteraka.
Toy izany koa ny olona. Tsy afaka manome sy manome fotsiny isika fa tsy mila fotoana hamerenana amin'ny laoniny, ary 'ho' fotsiny.
Miezaha maka fialan-tsasatra matetika: manalavitra ny andraikitra ara-tsosialy, ny elektronika ary ny media sosialy.
Makà torimaso maharitra 10 ora. Mihinana miadana, tsy misy fanelingelenana. Ahinjiro. Saintsaino, ary mijanona feno amin'izao fotoana izao .
Manao izany tsy tapaka fotsiny dia tsy ny hameno ny hery, fa efa manome ny sasany tena ilaina fomba fijery manokana sy fanentanam-panahy ihany koa.
9. Ny fahafaha-mitia, ary ho tiavina
Nisy nanontany ahy vao haingana raha afaka mitia aho.
Hitako fa fanontaniana manaitra ity, ka nanontany ny hafa aho raha izy ireo nanana olana tamin'ny fitiavana.
Nahagaga ihany ny valintenin'izy ireo, ary nahatonga ahy hanontany tena hoe firy ny olona mandà ny tenany ho karazana fitiavana.
Nilaza ny olona iray fa mora izany, nefa tsy mahazo aina izy ireo rehefa tiana satria mahatsapa ho tsy mendrika.
Ny iray kosa nilaza fa ny fitiavana olon-kafa dia mamela azy ireo ho tratry ny fanaintainana, noho izany dia miala amin'ny zavatra hafa izy ireo afa-tsy ny firaisana ara-nofo ambonin'izay.
Marina fa ny fitiavana dia mampidi-doza ny fanaintainana mety hitranga, indrindra raha izany ny fitiavana tsy misy valiny , na rehefa misy ny fatiantoka, fa ny fitiavana mihitsy no zavatra tsara hiainana.
Raha nisalasala handray anjara amin'ny iray ianao karazana fitiavana satria matahotra ny haratra ianao, angamba afaka miroso amin'ny karazana hafa ianao?
Ohatra, mety tsy hahazo aina ianao amin'ny fitiavana fitiavana am-pitiavana amin'izao fotoana izao, fa kosa maniry mafy hanompo ny mpiara-monina aminao.
Araka izany, azonao atao ny mijery an-tsitrapo ao an-dakozia lasopy. Na, raha tena tia biby ianao, dia afaka manao asa an-tsitrapo any amin'ny toeram-pialofana biby, na manampy amin'ny famelomana zanak'alika kamboty.
manambany ahy foana ny vady
Ny famelana ny tena ho tia dia mety ho sarotra kokoa, indrindra ho an'ireo zanaky ny mpampinono, na ireo izay niaina karazana fanararaotana ara-pihetseham-po, ara-batana na ara-tsaina hafa.
Maro amin'ireo olona ireo no mety tsy matoky ny fitiavana, satria izy io dia nampiasaina hanodikodinana azy ireo taloha.
Amin'ny tranga toa itony, ny fiaraha-miasa amin'ny mpitsabo na mpanazatra dia mety hanampy betsaka, toy ny dingana kely amin'ny tontolo azo antoka.
fianarana ny fomba fitiavana tsy misy fepetra , tsy misy antenaina, dia afaka mampianatra anao ny fomba hitiavanao azy.
Afaka maka fotoana izao hitranga, fa ny fitiavana no tena tsara indrindra, hery matanjaka indrindra eo amin'izao rehetra izao.
Mandà ny tenanao ve ianao?
Raha tsapanao fa nolavinao ny tenanao tamin'ireto zavatra ireto dia mandiniha fotoana kely hahitana ny anton'izany.
Raiso ny diarinao ary andramo ny milaza ny marina avy aiza avy ireo fahatsapana ireo.
Raha mbola eo ianao dia manaova lisitry ny pro / con, ary diniho ny fiovana isan-karazany momba izay mety hitranga raha avelanao hankafy ny zavatra nisorohinao sy nolavinao hatrizay.
Inona no zavatra ratsy indrindra mety hitranga, tena?
Nomena vatana ianao mandritra ny dianao mandritra ny androm-piainanao, ary fotoana maro tsy voatanisa hampiasa azy io hiaina fahagagana, fifaliana ary fitiavana.
Azafady, andramo tsy mahazo voafandrika ao hafa ny hevitry ny olona na ny didim-pitsarana.
Fa kosa, miezaha ho tonga farany, endrika tena marina indrindra amin'ny tenanao mety ho ianao.
Iray ihany ianao, ary MAGNIFICENT ianao.
ajanony ny fanomezan-tsiny ny hafa dia raiso ny andraikitrao
lazao amiko zavatra iray momba anao
rehefa mijoro amin'ny tenanao ianao
ahoana no ahalalanao raha te hanao firaisana fotsiny ny bandy
dia i dean ambrose sy renee tanora manambady
maninona ny olona sasany no ratsy toetra